“यदि तपाईको राती सुतेको बेलामा खुट्टा बाउँडिन्छ ? यस्तो गर्नुहोस “ – Krazy NepaL
November 14, 2021 155
यदि तपाईको राती सुतेको बेलामा खुट्टा बाउँडिन्छ ? यस्तो गर्नुहोस
यदि तपाईको राती खुट्टा बाउँडिने समस्यालाई निकै समस्यालाई अंधिकाशले सामान्य समस्याको रुपमा लिदै आएका छन् । सामान्य अर्थमा खुट्टाको तिघ्रानिर अथवा पिँडौंलाको मासु फर्कनुलाई खुट्टा बाउँडिनु भनिन्छ । यस्तो हुदाँ दुखाई सहन निकै गाहे हुन्छ । विशेषगरी आराम गरेको बेलामा एक्कासी तिघ्रा र पिडौंलाको मासुको भाग खुम्चिन गई बाउँडिन्छ । यस्तो विशेषतः रातको समय हुन्छ ।
लामो समय सम्म उभिए काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि ‘यस्तो समस्या’ हुन्छ । अग्लो’ हिल जुत्ता लगाउ’ने मानिस, खुट्टामा नमिल्ने जुत्ता लगाउँदा पनि यस्तो हुन्छ । २०१२मा गरिएको एक अध्यननको मा प्रकाशित खबरको अनुसार लामो समससम्म उभिनुनै खुट्टा बाउडिनुको मुख्य कारण भएको पत्ता लगाइएको थियो । त्यसैले लामो समयसम्म नउभिने वा अप्ठेरो जुत्ताको प्रयोग गर्नुहुदैन् ।
यदि मानिसको शरी’रमा पर्याप्त मात्रा’मा तरल पदार्थ नहुदा पनि ‘यस्तो हुन्छ । शरीरको मा’सु ७५ प्रतिशत जति पानीले बनेको कारण पानी वा तरल पदा’र्थको कमी’ले मासु खुम्च’ने वा खु’ल्ने ग’र्दछ । त्यसैले शरीर’मा तरल पदार्थ’को कमी हुन दिनु’हुदैन् ।
महिला गर्भ’वती भए”पछि प’नि पाठेघरले नशा तथा रक्तनलीमा चाप दिन खट्टा पल्टिने गर्दछ । शरीरमा भिटा’मिन बि १२ को कमि हुँ’दा पनि राति खुट्टा बाउडिने वा फर्कने गर्दछ ।
शरीर’मा थाइरा’इडको हर्मोन’को क’मीले अप्रत्यक्ष रूप’मा खुटृा बाउडिने वा फ’र्कने गर्दछ । विशेष’ग’री थाइराइट हार्मोनको कमीले शरी’रमा क्याल्सियम शोष गरी निकै असर गर्दछ । जसको कारणले गर्दा मासु कम’जोर भई यस्तो हुन्छ । त्यस्तै अनियन्त्रित मधुमेह, मध्यपानको सेवन अव्य’वस्थित खानपा’न र विभिन्न औषधी’को सेवन’ले पनि यस्तो हुन्छ ।
१.मद्यपान, धुम्रपान, चिया, कफी र सो’डाको सेवन नगर्ने ।
२.प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुलको र’स र दालको रस पिउने ।
३.यस्तो समस्या बारम्बार हुने’हरुले सुत्नु भन्दा अगाडी १० मिनेट साइकल चलाउने वा खुट्टा’लाई तन्काउने ।
४. सधैभरी सजिलोसगँ बसेर काम गर्ने र लामो समय’सम्म उभिने काम न’गर्ने ।
६. खुट्टा फर्केको समयमा हिड्ने’ वा मज्जा’ले हासेर एक्सरराइज गर्ने ।
८. तातो पानीले सेक्ने । तर पटक पटक रु’पमा खुट्टा बाउ’डिने वा फर्क’ने समस्या’ भए’मा चिकि’त्सलाई देखा’उनुपर्दछ । किनकि यसले गम्भीर समस्या पनि ल्याउँन सक्छ ।
Prevसोमबार यी ५ काम गर्नुहोस्, पुरा हुनेछन् हरेक इच्छा !
५ दिन भित्र ३ ल’क्षण देखिए हुनसक्छ को’रो’ना
आज २८ फागुन, शुक्रवार २०७७ निकै राम्रो छ हेर्नुहोस् राशिफल